ITALY – Garsoore Sports
Cristiano Ronaldo ayaa wali isku dayaya inuu qasbo inuu u dhaqaaqo Manchester City iyadoo wakiilkiisa Jorge Mendes uu shaqeynayo waqti dheeri ah si uu heshiis u dhaqan-geliyo. Xiddigii hore ee Manchester United iyo Real Madrid…
Xiddiga heerka caalami ee dalka Ingiriiska ayaa qarka u saaran inuu dhammeystiro heshiiska joogtada ah ee Stadio Olimpico uu ugu wareegayo, kaddib markii uu boos ka waayay kooxda macalin Tuchel ee Stamford Bridge. Weeraryahanka Chelsea…
Kooxda kubbada-cagte Roma ee dalka Talyaaniga ayaa u soo bandhigtay Chelsea heshiis 34 milyan oo ginni ah oo ay ku dooneyso weeraryahan Tammy Abraham. Dalabka wuxuu leeyahay inay amaah ku qaataan marka hore oo ay…
Superstar-ka reer Portugal ayaa galay sannadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa Italy, laakiin bixitaan kuma jiro qorshooyinkiisa haatan. Cristiano Ronaldo ayaa kusoo laabtay tababarka kooxda Juventus xilli xagaagii la hadal hayay arrimo kusaabsan mustaqbalkiisa kooxda iyadoo xitaa…
RASMI: Olivier Giroud Oo Ku Biiray AC Milan
Weeraryahanka Chelsea Olivier Giroud ayaa dhameystiray heshiis 2 milyan oo ginni ah oo uu ugu biirayo AC Milan, kaddib markii labada kooxoodba ay xaqiijiyeen. 34 jirkaan ayaa xiran doona maaliyadda No.9 ee kooxda Rossoneri waxaana…
Milan Oo Qarka U Saaran Saxiixa Giroud
Heshiiska AC Milan ee Olivier Giroud oo ay kala soo wareegeyso Chelsea waa mid dhow, sida laga soo xigtay Le Parisien. Cayaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa ogolaaday heshiis labo sano ah oo uu…
Sida laga soo xigtay Tuttospor, Kia Joorabchian – wakiilka Phillipe Coutinho – ayaa loo xilsaaray inuu kiliyentigiisa u raadiyo koox cusub. Ac Milan ayaa isha ku heysa beddelka Hakan Calhanoglu, kaasoo dhowaan si bilaash ah…